ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန | Pyithu Hluttaw
စုစုပေါင်းမေးခွန်း (202) ခု
(ဂ)-နှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်သက်တမ်းရှိသည့်ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)အားဆေးအသစ်သုတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကို မီးရထားလမ်း၊ ကားလမ်းဆက်သွယ်ပေါင်းကူးပေးထားသည့် ဧရာဝတီမြစ်ကူးစစ်ကိုင်းတံတား(အင်းဝ)ကို ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘုရင်ခံ Sir. Harcourt Butler ကအုတ်မြစ်ချခဲ့သည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘုရင်ခံ Sir. Hugh Stevenson က တံတားကြီးကို ဖွ
(ခ)-နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့် ယာဉ်များကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လွယ်ကူချော့မွေ့လျင်မြန်စေရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်(Digital Payment System)ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
လက်ရှိအခြေအနေအရမိမိတို့နိုင်ငံတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်မော်တော်ကားအသုံးပြုမှုနှုန်းထားများ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုနည်းတူ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်ယာဉ်များ၊ မှုခင်းဖြစ်ပွားသည့်ယာဉ်များလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မြင်တွေ့ကြားသိနေရပါကြောင်း၊ မြို့ကြီးများတွင် နေ့စဉ်ရာဂဏန်း
ကွမ်းလုံမြို့နယ်နှင့် ဟိုပန်မြို့နယ်ကို နယ်နိမိတ်ပိုင်းခြားစီးဆင်းနေသည့် နမ့်တိန်ချောင်း တစ်လျှောက် မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများဆုံးရှုံးနေပါကြောင်း၊ ၎င်းရေတိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊
(င)ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဒေသအချို့တွင် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် လာအောင် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ပေါက်တောမြို့နယ်၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဒေသအချို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ မရှိ၍ လည်းကောင်း၊ ရှိသော်လည်း တစ်တိုင်နှင့်တစ်တိုင် အလှမ်းကွာဝေးသည့်အပြင် ကြားခံအတားအဆီး များကြောင့်လည်းကောင်း တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းဘဲရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသည့်နေရာများကို ကောင်းလာအောင် မည်သို့
(ဃ)-ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကန်တော့ပြင်ကျေးရွာနှင့် သာစည်ပြင်ကျေးရွာကြားရှိ တန့်လန်းတောင်ပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မိမိတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်သည် ရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ရမ်းဗြဲကျွန်း၊ စကုကျွန်း၊ မာန်အောင်ကျွန်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြို့နှစ်မြို့ပါဝင်ပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၁ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၄၈ အုပ်စု ကျေးရွာ ပေါင်း ၁၉၃ ရွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လူဦးရေ ၁၁၀၀၀၀ နီးပါးနေထိုင်သည့် မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ